सेन्चुरीले अल्पाइन र सेती एक्वायर गर्न बोलायो विशेष साधारण सभा, कति छ स्वाप रेसियो ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सेन्चुरीले अल्पाइन र सेती एक्वायर गर्न बोलायो विशेष साधारण सभा, कति छ स्वाप रेसियो ?
काठमाडौं - सेन्चुरी बैंकले सेती फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गर्ने विशेष प्रस्तावसहित भदौ २३ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । सेन्चुरीले एक्विजिसन समितिले निर्धारण गरेको अल्पाइनसँगको १००ः९३ र सेतीसँगको १००ः७० अनुपातको सेयर स्वाप रेसियोलाई अनुमोदन गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि सभामा पेस गर्ने भएको छ । यसैगरी, बैंकले एक्विजिसन सम्बन्धी भएका सम्पूर्ण सहमति र सम्झौतापत्रहरु अनुमोदन गर्ने अर्को प्रस्ताव सभामा लैजाँदैछ ।
विशेष साधारण सभा अमृतभोग क्याटरर्स, कालिकास्थान काठमाडौंमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । सभा गर्न बैंकले भदौ १५ देखि २३ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ । यसआधारमा, भदौ १४ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन र भोट दिन पाउनेछन् । सेन्चुरीले यसअघि अरनिको र इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक तथा सगरमाथा फाइनान्सलाई एक्वायर गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ४६ करोड ६ लाख रुपैयाँ छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ २० पैसामा सीमित भएको छ । सेन्चुरीको प्रतिसेयर नेटवर्थ भने १२१ रुपैयाँ ७५ पैसा छ ।